M na usoro
Arọ Oil burner
Burner mapụtara Parts
Oil mgbapụta akụkụ
Gas mapụtara Parts
site ha na 18-09-04
Al-na-otu ikuku mmiri. Auto-operation Manual mgba ọkụ n'ihi na otu onye ogbo / abụọ ogbo zaa tube tupu mgbanye. Safety ire ọkụ Monitors usoro. The ikuku ụzọ ámá ga-emechi akpaka mgbe burner nkwụsị na-agba ọsọ. (Ntuziaka ịgbanwe ikuku ụzọ ámá n'ihi na otu onye ogbo) na ọ bụ adaba maka echichi, Jizọs na-ezipụ na ...
Burner Rịba ama mgbe ịzụrụ
site ha na 18-09-03
Rịba ama mgbe ịzụrụ: The dum esereese e mere site na irè ọkọlọtọ ibuo ji esi mmiri ọkụ. The ezigbo ọnọdụ nwere ike dị iche iche n'ihi na ndị na-esonụ ihe: a. nrụgide nke ji esi mmiri ọkụ nwere ike ghara ịbụ otu ihe ahụ. Ya mere ike nke burner merie ndị ji esi mmiri ọkụ nrụgide bụ differe ...
Dual Fuel burner Arọ Oil / Gas na nkà na ụzụ arụmọrụ
1.Alternate methane gas / arọ mmanụ burner. 2.Air-gas agwakọta na gbawara-pipe na a abụọ-ogbo-aga n'ihu mmepụta ọrụ. Iye ma ọ bụ uzuoku na sprayer. 3.Ability nweta ezigbo combustion ụkpụrụ site regu- lating combustion ikuku na gbawara-pipe. 4.Maintenance facilitated site eziokwu na agwakọta unit an ...
Eji / Modulating Light Oil burner Technological arụmọrụ
site ha na 18-09-02
1.Light mmanụ burner. 2.Two-ogbo-aga n'ihu mmepụta ọrụ. 3.High mgbali n'ibu atomisation nke manu iji nozulu. 4.Ability nweta ezigbo combustion ụkpụrụ site inye iwu combustion ikuku na gbawara-pipe. 5.Maintenance facilitated site eziokwu na atomisation unit nwere ike wepụrụ na ...
lebara Baoshan, Shanghai, CHINA
ekwentị + 86-021-56730500